Fumanisa indlela yokwenza uninzi lwebhalkoni yakho encinci | IBezzia
Yenza uninzi lwebhalkoni yakho
Susana Garcia | | Ukuhonjiswa, Ukuhombisa amaqhinga
La indawo ye-balcony yindawo yangaphandle Oko kungasinika umdlalo omninzi ukuba siyayazi ukuba singayisebenzisa njani. Siza kubona izimvo zokusebenzisa ibhalkhoni, loo ndawo izisa uchuku lwangaphandle kwimigangatho emininzi evaliweyo kwaye isinike indawo yokuphumla amatyeli amaninzi. Baninzi abantu abangayonwabeliyo le ndawo incinci ingaphandle njengoko kufanelekile.
Sobona ezinye izimvo zokuhombisa ukuze ufumane okuninzi kwibhalkoni yethu. Lo mmandla mkhulu ukwenza indawo yokuphumla okanye indawo yendalo ngokupheleleyo. Yonwabela ukuyilungisa kwakhona ikhaya lakho ukuze liyenze ibe yindawo ecocekileyo kwaye esebenzayo. Ngenxa yokuba ibhalkhoni yenye indawo enokuba luncedo kakhulu.
1 Ifenitshala esongelayo ukuthatha ithuba lebhalkhoni
2 Yongeza izityalo ezininzi
3 Umthi kunye nezityalo zenza imeko yendalo
4 Inebhanki yokugcina
5 Impahla elukiweyo yebhalkhoni
6 Isibane esincinci
Ifenitshala esongelayo ukuthatha ithuba lebhalkhoni
Enye yezinto esinokuyenza Ukusetyenziswa kwebhalkhoni yifenitshala yokusonga. Olu hlobo lwefanitshala luhlala kancinci kwaye lunenzuzo enkulu yokuba ukuba imozulu imbi sinokuyigcina kwikona yegumbi lokuhlala. Zezona zikhetho zibalaseleyo kwiibhalkoni ezincinci nezincinci, njengoko ngale ndlela sinokususa ngokulula ngaphandle komzamo omkhulu kwaye sizigcine ekoneni de sizidinge kwakhona. Zininzi iintlobo zefanitshala esongekayo kwizinto ezinjengomthi okanye isinyithi. Ukongeza, olu hlobo lwefanitshala yangaphandle lunamaxabiso amahle kakhulu.
Yongeza izityalo ezininzi
Las izityalo yenye into ebalulekileyo kwi balcony yethu. Ngabo sinika ubomi kwi-balcony, siyigcwalisa ngombala kwaye senza yonke into ibe yendalo ngakumbi. Ingathi singanaso isiqwenga sangaphandle endlwini yethu okanye kwigumbi lethu ngaphandle kwegadi. Singatyala nezityalo ezinevumba elimnandi ukuze sizisebenzise ekhitshini njenge rosemary. Umbono wezityalo kukusebenzisa izimbiza ezithe nkqo, kuba ngaloo ndlela asizukuthatha ndawo kwi-balcony ngeembiza ezinkulu.
Umthi kunye nezityalo zenza imeko yendalo
Baninzi abantu abafuna yenza ibhalkhoni enezinto zendalo ezichukumisayo, eziphefumlelweyo ngendalo. Ngenxa yoko kufuneka sisebenzise izinto zendalo ezinje ngomthi kunye nenkuni ezininzi. Kule balcony siyayibona loo mbono ngeethoni ezisisiseko kumalaphu, ukufudumala kweenkuni kunye nezityalo ezininzi ezinika indalo kuyo yonke into. Ngaphandle kwamathandabuzo enye yeebhalkhoni esizithanda kakhulu.
El Ukugcina yenye indawo ephambili kwiibhalkoni ezincinci. Kungenxa yoko le nto ukongeza ibhentshi yokugcina ingumbono olungileyo. Ezi zitulo zisetyenziselwa ukuhlala, ke sigcina ifanitshala, kwaye ngaphantsi kushiya isithuba sokugcina izinto. Zintle ngoba ziyasivumela ukuba sigcine impahla okanye izinto ezilungiselelwe ukuzicwangcisa ngokulula izityalo kwikona enye kwaye ngaphandle kokulahlekelwa yindawo. Nale inamavili, eyenza kube lula kuthi ukuyisusa kwelinye icala iye kwelinye.
Impahla elukiweyo yebhalkhoni
Los Iibhalkoni zeCozier zihlala zisebenzisa iimpahla ezilukiweyo. Kuyinyani ukuba sinokubakhupha kuphela xa imozulu intle ukunqanda ukubonakalisa, kodwa olu hlobo lwamalaphu lusivumela ukuba sizive sikhululekile kwi-balcony. Khetha imitya elungileyo yezitulo okanye iibhentshi, ezinye iingubo zeentsuku ezipholileyo kwaye uya kuba nebhalkoni efanelekileyo.
Ukuba sifuna ukufumana okungakumbi kwibhalkoni yethuKufuneka kwakhona ibe yindawo esinokuyisebenzisa ebusuku okanye xa kutshona ilanga. Ngale nto sifuna ukukhanya kancinci. Abanye abantu bakhetha amanye amakhandlela ukwenza i-atmosfera kodwa ungasebenzisa ii-garland ezisebenza ngeebhetri ezimbalwa kwaye zinike ukukhanya kancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Yenza uninzi lwebhalkoni yakho
Kutheni kubalulekile ukubona ugqirha wengqondo
Izitayile ezentofontofo ezineebhulukhwe ezimhlophe zentwasahlobo